Guqula iFayile yePST yakudala ibe yifomathi eNtsha ye-Outlook 2003 ye-Unicode-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Guqula i-Outlook 97-2002 PST yeFayile kwi-Outlook 2003-2010 Unicode Format
usebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukuguqula iFayile ye-Outlook 97-2002 ye-PST kwi-New Outlook 2003-2010 Unicode Format
Qaphela: Kuya kufuneka ube ne-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiweyo ukuze usebenzise esi sikhokelo.
Ukusukela kwi-Outlook 2003, kufakwa ifomathi entsha ye-PST enezibonelelo ezininzi kunale yakudala. Abasebenzisi bokugqibela, most ezibalulekileyo zezi:
Inkxaso ye-Unicode yeelwimi ezininzi
Akukho mda umiselweyo we-2GB kwifayile yePST
Akukho miqobo ingama-65,000 (okanye i-16,000 yeenguqulelo ezingaphambili) kwinani lezinto kwifolda nganye
Ngenxa yokuqala, le fomathi intsha ibizwa ngokuba Ifomathi ye-Unicode Ngokwesiqhelo, ngelixa ifomathi yakudala ibizwa njalo Ifomathi ye-ANSI ngokufanelekileyo. Omabini la magama aya kusetyenziswa kwesi sikhokelo. Njengakweli xesha idatha yoqhakamshelwano inyuka ngokukhawuleza, ukususwa kwemida kwifayile ye-PST kubaluleke kakhulu kubasebenzisi. Ke ngoko, sicebisa ukuba uguqule iifayile zakho ezindala ze-ANSI PST kwifomathi entsha ye-Unicode. Ngapha koko, le ikwayifayile ye- Esona sisombululo sisiso kwifayile engaphezulu kwe-2GB PST.
IMicrosoft ayivelisanga sixhobo sinokwenza uguquko. Kodwa ungakhathazeki. DataNumen Outlook Repair ingakwenzela oku.
Phawula: Ngaphambi kokuguqula ifayile ye-ANSI PST endala nge DataNumen Outlook RepairNceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile yePST.
Khetha ifayile endala ye-ANSI PST njengomthombo wePST oza kulungiswa:
Njengoko ifayile ye-PST ikwifomathi yakudala ye-Outlook 97-2002, nceda ucacise ifomathi yefayile yayo kwi "Outlook 97-2002" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela ifayile. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair izakuskena ifayile yePST ukuba imisele ifomati yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo kwaye akuyomfuneko.
Ngokuzenzekela, DataNumen Outlook Repair iya kugcina idatha eguqulweyo kwifayile entsha ye-PST ebizwa ngokuba yi-xxxx_fixed.pst, apho i-xxxx ligama lefayile yePST. Umzekelo, kwifayile yePST yomthombo we-Outlook.pst, ifayile eguqulweyo emiselweyo iya kuba yi-Outlook_fixed.pst. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile eguqulweyo ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kunye nokukhetha igama eliguqulweyo lefayile.
Njengoko sifuna ukuguqula ifayile ye-ANSI PST ibe yifomathi ye-Unicode, kufuneka sikhethe ifomathi yefayile ye-PST eguqulweyo kwi "Outlook 2003-2010" kwibhokisi ye combo ecaleni kwebhokisi yokuhlela yefayile eguqulweyo. Ukuba useta ifomathi ku- "Outlook 97-2002" okanye "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Outlook Repair isilela ukuqhubekekisa kunye nokuguqula ifayile yakho ye-ANSI PST.
Nceda uqaphele ukuba une-Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu ezifakiweyo ukuze ifayile iguqulwe ngempumelelo.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Outlook Repair Ndiza start Ukuskena nokuguqula ifayile ye-ANSI PST. Inkqubela phambili bar
Emva kwenkqubo, ukuba ifayile ye-ANSI PST ingaguqulelwa kwifayile entsha ye-Unicode PST ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ifayile entsha ye-PST eguqulweyo ikwifomathi ye-Unicode, enokuvulwa yiMicrosoft Outlook 2003 okanye iinguqulelo eziphezulu.
Phawula: Inguqulelo yedemo iya kubonisa le bhokisi yemiyalezo ilandelayo ukubonisa impumelelo yenguqu:
Kwifayile entsha eguqulweyo ye-PST, imixholo yemiyalezo kunye nezifakelo ziya kutshintshwa ngolwazi lwedemo. Ndiyacela odola ingxelo epheleleyo ukufumana imixholo eguqulweyo.
Guqula i-Outlook 97-2002 PST yeFayile kwi-Outlook 2003-2010 Unicode Format